यी २ सपनालाई भूलेर पनि नगर्नुहोस् वेवास्ता, लुकेको हुन्छ खास संकेत…… – SUDUR MEDIA
यी २ सपनालाई भूलेर पनि नगर्नुहोस् वेवास्ता, लुकेको हुन्छ खास संकेत……
April 24, 2021 AdminLeaveaComment on यी २ सपनालाई भूलेर पनि नगर्नुहोस् वेवास्ता, लुकेको हुन्छ खास संकेत……
काठमाडौँ । गहिरो निन्द्रामा भएको बेलामा तपाई जुन सपना देख्नुहुन्छ त्यस्ता सपनाले तपाईको भविष्यका शुभ र अशुका लक्षणको संकेत गर्छ । अवचेतन मस्तिस्कमा आएका दृश्यहरुले तपाईको वास्तविक जीवनमा पनि असर पर्न सक्छ। यस्ता केही सपनाले तपाईलाई धनी वनाउने मार्गमा लागिरहेको हुन्छ तर तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ।
आज हामी तपाईलाई यस्तै दुई सपनाका बारेमा जानकारी दिदैछौँ। जो सपना ती व्यक्तिले मात्र देख्छन्, जो निकै भाग्यमानी हुने गर्दछन् । यसको मतलब यदी तपाईले यी दुई मध्ये कुनै एक वा दुबै सपना देख्नुहुन्छ भने तपाई वास्तवमै भाग्यमानी मानिनु हुन्छ । आउनुहोस् जानौँ :
१) स्वप्न शास्त्रका अनुसार यस्तो मानिन्छ की सपनामा यदी पहाडबाट पानी झरेको देख्नुभयो भने वा उक्त झरनाको पानीमा नुहाएको देख्नुभयो भने निकै शुभ मानिने गर्दछ । यस्तो सपना आउनु निकै शुभ मानिनुका साथै यसले शुभ संकेत दिने गर्दछ। यदी तपाईले यस्तो सपना देख्नुभयो भने कसैलाई पनि भन्न हुँदैन । शास्त्रका अनुसार यस्तो सपना लाखौँ मानिस मध्ये एक व्यक्तिलाई मात्र आउने गर्दछ। यदी तपाईले यस्तो सपना दुख्नु सुख, समृद्धिको आगमनको संकेत हो । यस्तो सपना देख्दा दुख अन्त्य हुने पनि बताइन्छ। त्यसैले यस्तो सपनालाई आफैमा सिमित राख्नुहोस् र अरु कसैलाई पनि नसुनाउनुहोस्।
२) यदी सपनामा आफूले आर्शिवाद लिएको देख्नुभयो भने पनि निकै शुभ मानिन्छ । यस्तो सपना देख्नु मान सम्मान प्राप्त गर्नु तथा बढोत्तरीको संकेत हो। तपाईलाई जानकारी दिउ की यस्तो सपना देख्नु पनि निकै शुभ मानिने गरिन्छ । यस्तो सपना पनि निकै कम व्यक्तिले मात्र देख्ने गर्दछन। यदी तपाईले यस्तो सपना देख्नुभयो भने सम्झनुहोस् तपाईको जीवनमा राम्रो दिनको सुरुवात हुँदैछ ।
थप समाचारः तपाईका हातमा यी ४ शुभ चिन्ह छन् भने यसरी चम्किन्छ भाग्य…..हाम्राे धार्मिक शास्त्रका अनुसार हस्तरेखा शास्त्र हातका शुभ संकेतहरूले व्यक्तिको जीवनमा सुख, समृद्धि, सम्पन्नता आदिको योग प्रकट गर्दछन्। हामी हस्तस्तक (हस्त रेखा) मा स्वास्तिक, शंख, चक्र, कमल जस्ता संकेतको महत्त्व र एक व्यक्तिको भाग्यका बारे जान्नुहाेस् ।
पाल्मस्ट्री लाइन्स वा पाम रीडिंग साइन्स अर्थात हस्तरेखा विज्ञान अनुसार, हातका रेखाले व्यक्तिको जीवनमा उतार–चढावको बारेमा बताउँदछ। उही समयमा, हातको शुभ संकेतहरूले व्यक्तिको जीवनमा सुख, समृद्धि, धन इत्यादि को योग प्रकट गर्दछ। हस्त रेखामा स्वास्तिक, शंख, चक्र, कमल जस्ता संकेतको महत्त्व यहाँ जान्नुहोस्ः
स्वास्तिक: स्वस्तिकको प्रतीकलाई हिन्दू धर्मको एकदम पवित्र प्रतीक मानिन्छ। पूजा गर्नु अघि स्वस्तिकको प्रतीक बनाउने विशेष परम्परा छ। आफ्नो हातमा स्वस्तिकको प्रतीक बोक्ने व्यक्तिले सदैव राम्रो काम गर्दछ र धर्मलाई नष्ट हुन दिँदैनन् । यस्तो व्यक्ति आदर र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दछ।
कमल: कमलको प्रतीक माँ लक्ष्मीसँग सम्बन्धित छ। यस व्यक्तिको हातमा यो प्रतीक छ, ऊ एक एकाधिकार राज्यको मालिक हो। त्यस्तो व्यक्ति ठूलो उद्योगपति बन्न सक्छ। साथै, धेरै व्यक्तिहरू तिनीहरूको सेवामा व्यस्त छन्। धेरै अवस्थाहरूमा यो देखिएको छ कि कमलको चिह्न भए पनि कुनै व्यक्ति भने अहंकारी हुन्छ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः यी ५ युवती मध्ये कुन मनपर्यो ? एक छान्नुहोस र थाहा पाउनुहोस् आफ्नो व्यक्तित्व…..यी मध्ये सबैभन्दा आकर्षक को होला। यो त तपाईलाई नै थाहा होला । यदि तपाईलाई व्यक्तिको खुबी सधैँ एउटै हुन्छ भन्ने लाग्छ भने तपाई यसबारेमा कम जानकार हुनुहुन्छ । वास्तवमा हाम्रो मानसिक स्थिति कस्तो छ यसले हाम्रो व्यक्तित्वमा केहि हदसम्म प्रभावित गर्छ ।
त्यसैले जब कहिले तपाईको अगाडी कोहि व्यक्तित्व परीक्षण गर्न आयो र तपाईले जवाफ दिनुपर्यो भने तपाईलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि तपाईले मात्र आफ्नो वर्तमानको कुरा मात्र भनिरहनु भएको छ । अब तपाईको अगाडी यो पाँच तस्विर छ जुनमा तिनीहरुको पछाडीको भाग देखिएको छ। अब तपाईलाई थाहा छैन कि यी युवतीले फर्किन्छ कि फर्किदैन । यी मध्ये सबैभन्दा आकर्षक को होला। यो त तपाईलाई नै थाहा होला।
पहिलो युवती– यदि तपाईलाई पहिलो तस्विरको मान्छे आकर्षक लाग्छ भने यो अर्थ स्पष्ट छ कि तपाई निकै शान्त र आत्मविश्वासले भरिपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ । तपाई आफ्नो जीवनमा आउने कुनै पनि बा’धा आउदा सम्हालन सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म उद्देश्यलाई प्राप्त गर्ने कुरा छ भने त्यसको लागि तपाई निकै ग’म्भीर रहनुहुनेछ ।
दोस्रो युवती– यदि तपाईलाई लाग्छ कि चौथो युवति यो पाचौँ युवतीभन्दा आकर्षक लाग्छ भने तपाईलाई दुविधामा पार्न कसैले सक्दैन। तपाई आफ्नो मनभन्दा दिमागले काम गर्नुहुन्छ। तपाईलाई यो कुरा थाहा हुन्छ कि तपाईलाई धेरै कुरा हासिल गर्नु छ। त्यसैले तपाई आफुमाथि आउने बाधाप्रति डराउनु हुन्न। तपाई निकै नम्र स्वभावको मान्छे हो ।
तेस्रो युवती- यदि तपाईलाई तेस्रो युवति धेरै आकर्षक लाग्छ भने तपाई निकै लजालु मान्छे हुनुहुन्छ । तपाई छिट्टै मान्छेहरुसँग घुलमिल गर्नुहुन्छ । तपाईले आफ्नो अगाडी भएको मान्छे चिनेको भने छिट्टै मिल्न सक्छन ।
चौथी युवती– यदि कसैलाई यो तस्विरमा रहेको युवति सबैभन्दा धेरै आकर्षित जस्तो लाग्छ भने यसको अर्थ यो हो कि तपाई निकै सामाजिक व्यक्ति हुनुहुन्छ ।तपाई भित्र बचपना रहेको हुन्छ । तर तपाईलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा हुन्छ कि तपाई आफ्नो उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ । यस्ता मान्छेहरु प्राय राम्रो मूडमा हुन्छन् र कहिलेकाहिँ मूड खराब हुन्छ। तपाई हरेक स्थितिमा सकारात्मक रहने कोसिस गर्नुहुन्छ ।
पाचौँ युवती– यदि तपाईको रोजाई पाचौँ युवति हो भने यो स्पष्ट छ कि तपाई स्वतन्त्र विचार मान्छे हुनुहुन्छ। तपाई निकै जिद्दी हुनुहुन्छ । तपाई कसैसंग मिल्न त्यति मनपराउनु हुदैन। तर कसैसँग साथी बन्यो भने त्यसको लागे जे पनि गर्नुहुन्छ । यी माथिका मध्ये सबैभन्दा आकर्षक को होला। यो त तपाईलाई नै थाहा होला। यी ५ युवती मध्ये कुन युवती मनपर्यो ? एक रोज्नुस् अनि थाहा पाउनुभएको होला आफ्नो व्यक्तित्व धन्यबाद !
यो पनि हेर्नुहोस्ः भूकम्प जाँदा बि’ग्रिएको १०० वर्ष पुरानो घडी अर्को भूकम्पको ध’क्का पछि आफैं चलन थाल्यो ! भूकम्प जाँदा बि’ग्रिएको १०० वर्ष पुरानो घडी अर्को भूकम्पको ध’क्का पछि आफैं चलन थाल्यो ! भोलि बैशाख १२ गते विनाशकारी भू’कम्प गएको ठिक ६ वर्ष पूरा हुँदैछ । नेपालमा भूकम्पको स्म’रण भइरहँदा भुकम्पसम्बन्धी एउटा अ’त्यन्तै अनौठो घ’टना जापानमा भएको छ ।
जापानका १०० वर्ष पुरानो एउटा घडी १० वर्ष पहिले भूकम्पको ध’क्काका कारण बि’ग्रिएको थियो । त्यो घडी बिग्रिएको १० वर्षपछि आफैं ठिक भएको छ र चल्न थालेको छ । अहिले पुनः अर्को भूकम्पको ध’क्का लागेपछि यो घडी आफैं चल्न थालेको हो ।द गार्डियनमा प्रकाशित समाचार अनुसार घटना जापानको यमामोटोको हो ।
रिपोर्टअनुसार यहाँ एक बौद्ध म’ठमा १०० वर्ष पुरानो विशाल घडी छ । यो घडी १० वर्ष पहिले भूकम्पको ध’क्काका कारण ब’न्द भएको थियो । त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म यो घडी ब’न्द थियो । हाजै फेब्रुअरी महिनामा यो क्षेत्रमा फेरि भूकम्प गयो । भुकम्पको ध’क्कापछि यो घडी आफैं ठिक भयो र चल्न थाल्यो ।
यो घडी पहिले जसरी चल्थ्यो त्यसरी नै चल्न थालेको थियो ।रिपोर्टका अनुसार यो घडी निर्माता कम्पनीका प्रतिनिधि पनि त्यहाँ गएर घडी जाँच गरेका थिए । मठको आसपासका बा’सिन्दाले घडी ठिक हुँदा आफूहरु निकै खुसी भएको बताएका छन् । १० वर्षअघि भूकम्पपछि सु’नामी पनि आएको थियो र पानी मठभित्र पनि प’सेको थियो । मठका खम्बा र छत मात्र ब’चेका थिए । घडी खम्बामा झु’ण्ड्याइएकोले जो’गिएको थियो । स्थिति सुधार भएपछि मठ प्रमुखले घडी मर्मत गर्ने निकै को’सिस गर्दा पनि ठिक बनाउन सकेका थिएनन् । केही सीप नलागेपछि घडीलाई त्यत्तिकै छो’डिएको थियो ।
नेपालमै पहिलोपटक गुल्मीमा भेटियो यस्तो अचम्मको गाई, लगातार ७ वर्ष देखि दिईरहेको छ दुध ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)